1। सिन्फिफेरान एचसीएल (एक्सएनएक्सएक्स- 5985-28) तथ्यहरू
2। Synephrine समीक्षाहरू
3। Synephrine के हो (5985-28-4)?
4। Synephrine एक्शन एचसीएल पाउडर को तंत्र
5। Synephrine को स्वास्थ्य लाभ
6। Synephrine को सम्भावित साइड इफेक्ट्स
7। Synephrine सिफारिस गरिएको प्रयोग
8। छलफलको लागि शीर्ष शीर्षक: सिफिफाइन बनाम क्याफिन
9। खरीद Synephrine पूरक अनलाइन
10। सिफिफेरिनमा निष्कर्ष (5985-28-4)
सिफप्रिदम एचसीएल (एक्सएनएक्सएक्स- 5985-28) तथ्यहरू
Synephrine (5985-28-4) एक अल्केलोइड हो जुन सामान्यतया पूरक सिफिफाइनल एचसीएल गठन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो आलेख Synephrine तथ्यहरू, Synephrine इतिहास, कार्य को synephrine एचसीएल संयन्त्र, synephrine को स्वास्थ्य लाभ, सम्भावित साइड इफेक्ट समावेश / synephrine र synephrine को जोखिम उपयोग सिफारिस गरिएको।
को प्रयोग Synephrine (कैस: 5985-28-4, Para Synephrine, वा पी-Synephrine रूपमा चिनिने) फिर्ता धेरै वर्ष पहिले मिति र फिर्ता मूल चीन लगाया जान सक्छ। Synephrine को औषधीय मूल्य थियो क्षेत्रमा पत्ता लगाइयो जहाँ यो पहिला जडिबुटीको रोग जस्तै अल्सा र कब्जेर उपचार गर्न प्रयोग भएको थियो। साथै, पुरातन ब्राजीलियनले सिपाफेरिनलाई नम्रता, चिन्ता र आक्रोशणहरूको उपायको रूपमा प्रयोग गरे।
कडा नारंगी रूख, एशिया र भूमध्यसागरमा पाइन्छ।
निम्न सामान्य तथ्याङ्कहरू छन् जुन सिन्फिफेरेर प्रयोग गर्न चाहने हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ कि कुनबाट रासायनिक (कडा सुन्तला फल) बाट व्युत्पन्न हुन्छ भन्ने फललाई थाहा छ:
फल पनि यी एपिडेरिनमा अन्य रसायनहरू छन्। पछिल्लो पदार्थको एकाग्रता तथापि धेरै कम हुन्छ।
कपाल सुन्तला फल लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहेको छ र यसको उपयोग मूल देशमा फिर्ता आउँछ, जहाँ यसलाई मुख्य रूपले पेटको जटिलताहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो पूर्वी अफ्रीकाका केही भागमा पनि उपलब्ध छ।
परम्परागत रूपमा, कडा नारंगी काल्पनिक, कब्ज, र अपमानजनक उपचार गर्न प्रयोग गरिएको थियो। भूमध्यसागरमा, यो खरगोशको उपचार गर्न, वजन घटाने प्रवर्द्धन र भूख कम गर्न प्रयोग गरिएको थियो। यसको तेल अर्कै कहिलेकाहीँ छालामा लागू गरिएको थियो, तर यसलाई प्रायः यसको निकाल्दा फारममा प्रयोग गरिएको छ।
वरपर वरपर सम्वन्ध
सिफिफेरियो पाउडरको लागि लामो समयसम्म अन्य पदार्थहरूको लागि यो समान छ भ्रमित भएको छ। यो विलम्ब धेरै गम्भीर छ कि केहि सम्मानित वैज्ञानिक पत्रिकाहरू पनि यो उचित तरिकाले यो रासायनिक वर्गीकरण गर्न स्थापित गर्न खोज्न। सिफिफेरिनबाट समान तर फरक छन् जुन केही समावेश छन्:
बिटर सुन्तला निकाट। यो मुख्यतः सिन्फिफाइनको स्रोत हो। तथापि, धेरै मानिसहरू अझै पनि यो रासायनिक भन्दा बढी सजग नहुने छैनन्, त्यहाँ त्यहाँ अन्य पदार्थहरू सिफिफिरीसँग समान छन् जुन त्यहाँ तिनीहरूको कार्यको मोडमा धेरै भिन्न हुन्छन्। यस कारणको लागि, कडा सुन्तला विभिन्न रोगहरूको उपचारको लागि एक विश्वसनीय समाधानको रूपमा चिनिन्छ र यी रोगहरूको उपचारको लागी जिम्मेवार रसायन-सिफिफाइननबाट फरक हुन्छ।
फेनाइलफाइनरी। यो रासायनिक संरचनात्मक रूपमा सिन्फिफाइननसँग समान छ, तर कार्यका मोडहरू फरक छन्। जबकि सिफिफेरियो थर्मोजेनेसिस मार्फत शरीर को चयापचय को सुधार को लागि प्रयोग गरिन्छ, फेनेलिल्थिनन मुख्य रूप देखि एक नाक decongestant को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। रासायनिक फिनेलीफेरेरले सर्जिकल अपरेसनमा पनि प्रयोग गरिएको छ भने आँखाको विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने। फेन्लिलेफ्रेन्टलाई कृत्रिम बनाइयो। अर्कोतर्फ, सिन्फिफ्रिन्स, पौष्टिक निकायबाट प्राप्त हुन्छ।
Ephedrine। कडा नारंगी फल यस एपिडेरिन को महत्वपूर्ण भंडार पनि पाइएको छ। एपhedrine एक धेरै बलियो उत्तेजक हो र जसको प्रयोग नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ यो दृढतापूर्वक नशेकोक हो।
उत्तेजक एपहाड्रेट को संरचना Synephrine को समान छ, र यो मुख्य रूप देखि दुई रसायनहरु को भ्रमित बिट हो। तथापि, मानिसहरूको प्रतिकूल असरका लागि धेरै ठाउँहरूमा एपिडेरिनको प्रयोग निषेध गरिएको छ, खासगरी यदि तपाईं Synephrine ले लो बिना नियन्त्रण। अर्कोतर्फ, सिफिफेरिनको प्रयोगले कुनै पनि समान साइड इफेक्टहरू गर्दैन, र यो एपिडेरिन भन्दा तुलनात्मक रूपमा एक सुरक्षित विकल्प मानिन्छ।
वर्तमान Synephrine प्रयोग
वर्तमानमा, सिफिफाइन र Synephrine पूरक शरीरको चयापचयको सुधारको लागि उनीहरूको विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। उत्तेजनाले थर्मोजेनसिसको प्रक्रिया बढाउँछ, जसको माध्यमबाट शरीरमा अतिरिक्त वसा माटोहरू बनाइन्छ।
शरीरले यो लेजरलाई राम्रो बनाइएको रूप देखेर यसलाई प्रतिक्रिया दिन्छ। उत्तेजनाले मानिसहरूलाई पनि स्वस्थ भूखान कायम राख्न र उचित चयापचय समर्थन गर्न मद्दत गर्दछ।
Synephrine कसरि सुरक्षित छ एचसीएल पाउडर?
Synephrine एचसीएल पाउडर को सुरक्षा व्यापक रूप देखि संदेह छैन किनकि यो अन्य उत्तेजकहरु संग मामला हो। यो कारणले गर्दा लागूपदार्थ बारम्बार परीक्षण गरिएको छ र यो हानिरहेमा फेला पर्यो भने विशेष गरी यदि उपयुक्त खुराक प्रयोग गर्दछ।
सबै भन्दा व्यापक प्रत्याशित पक्ष परिणाम कुनै पनि उत्तेजना को प्रयोग पछि उच्च रक्तचाप को विकास हो जुन प्रायः फास्ट असामान्य हृदय धरातल दर संग हुन्छ। यद्यपि, सिफिफेरेरको प्रयोगले फरक साइड परिणामहरू प्रदान गर्नेछ। यसले यसलाई महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन-बढ्दो ड्रगका लागि एक फरक र राम्रो विकल्प दिन्छ जुन आज बजारमा छ।
तथापि, केही अध्ययनहरूले देखाउँछ कि क्याफिन र synephrine एचसीएल पाउडर सम्भावित घातक हृदय रोगहरूको कारणले सम्भव छ। यद्यपि, अरू शोधकर्ताले त्यस्तो सम्भावनालाई शासन गरेका छन्। हामी पछि यहाँ छलफलको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ।
सिफाफेन खपत सम्बन्धी एफडीएले कुनै चेतावनी जारी गरेको छैन। वास्तवमा, केहि देशहरूमा, सिफिफेरिनको प्रयोग एपिड्रिनाको स्थानमा अत्यधिक प्रोत्साहित गरिएको छ। यो सुरक्षा चिन्ताको कारण हो जुन अक्सर एपहाडिन प्रयोग गर्ने बेला उठाइन्छ जब धेरै शक्तिशाली उत्तेजना हुन्छ। यसले यसलाई उच्च रक्तचापको लागि सम्भावित पूर्ववर्ती बनाउँछ र हृदयघात दर बढाउँछ।
मोटेबाट सकारात्मक समिकरण (5985-28-4) समीक्षाहरू प्राप्त गर्नुहोस्
Synephrine एचसीएल पाउडरको प्रयोग ले धेरै समीक्षाहरू उत्पन्न गरेको छ। त्यहाँ केहि नकारात्मकहरू छन्, अधिकांश मानिसहरू खुसी छन् जो पूरकले उनीहरूलाई विशेष शरीरको वसा गुमाउन चाहने विशेष गरी प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ। ती केही चीजहरूमा उनीहरूले यसो भन्छन्:
जेम्स शा : जेम्स शॉ एक 44-वर्षीय हो जुन इङ्गल्याण्ड लिभरपूलमा बस्छ। उनी भन्छन्, "म केही समयको लागि थोरै होईन, र यो समस्याले मलाई निकै बलियो बनाएको छ, विशेष गरी जब म राम्रो निर्माण गरिएको शरीर सम्झन्छु जुन मेरो प्रारम्भिक तेस्रो दिनमा थियो। मैले अहिलेसम्म पाँच वर्षको लागि उच्च रक्तचापबाट पीडित भएको छु र मेरो पूरै पूरक प्रयोग गरी डर लागेको छ किनभने मेरो समस्या बिग्रेको हुन सक्छ। " Yohimbine: प्रयोग गर्दछ + प्रभाव + योहोम्बेन बिक्री मा खुराक
"म पहिलो दिनमा प्रति दिन 20mg को खुट्टा दिइयो, र यो बिस्तारै वृद्धि भएको थियो किनकि डाक्टरले मेरो अवस्थाको पहुँच राखे। सौभाग्य देखि, अवधि को भित्र केहि घातक नहीं भयो र मेरो शरीर मैले अपेक्षित हद सम्म सुधार गरे। आज, म मेरो शरीरको उपस्थितिको बारेमा शंकास्पद महसुस नगरी खुसीसाथ हिड्न सक्छु। म सिन्फिफाइनको प्रयोगलाई सबैलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु जसले परिणामको बारेमा कुनै संदेह बिना वजनको मुद्दाहरू राख्दछ। "उनले थपिन्।
Katlego Muphulukuzi: Katlego Muphulukuzi दक्षिण अफ्रीका देखि एक 29 वर्ष पुरानो हो। Synephrine प्रयोग पछि, यो उहाँले के भन्नु भएको छ, "मैले प्यार Syncrine पूरक प्रयोग गरि सुरु समय भन्दा ज्यादै तल गएको थियो। म पहिले कहिल्यै भन्दा अधिक ऊर्जावान महसुस गर्दछु। मैले स्थानीय जिममा नामांकन गरें, र छ महिना भित्र मेरो शरीरले पनि धेरै परिवर्तन गर्यो; म धेरै सुन्दर देख्छु। "
पल McLaughlin शिकागो, ईलिनोइसमा एक रसायनज्ञमा काम गर्दछ: "म सात वर्षको लागि खुदरा रसायनज्ञ हुँ। सुरुमा हामी एपिड्रिड बेच्दै थियौँ, र यो पसलमा सबैभन्दा छिटो बिक्री औषधि थियो। तथ्याङ्कले गर्दा प्रतिबन्धित पदार्थ पुनर्स्थापना गर्न राज्य ड्रग नियन्त्रण नियन्त्रण बोर्डमा हामी आए। हामीले अलमल्याइबाट एपिडेरिनलाई हटाउनु पर्छ वा अन्य रसायनज्ञ बन्द हुनेछ। यस पछि, महान अनिश्चितता कसरी रसायनज्ञ सबै भन्दा बढी उपभोग्य वस्तुहरु मध्ये एक बिना चलाउन कसरी आयो।
उनी भन्छन्, "" अझै पनि यो क्षणमा, शब्द दौर भयो कि सिन्फिफ्रिन्स एपिडेरिन को प्रतिस्थापन गर्न नयाँ चीज थियो। मैले व्यक्तिगत रूपमा सोचेको छैन कि केहि पनि एप्याड्रेन प्रतिस्थापित गर्न सक्छ तर मैले ग्राहकहरुबाट प्राप्त गरेको समीक्षाले मलाई सोच्न बाध्य बनायो। एक खतरनाक दर मा पूरक पूरक को लागि मान्छे आए। सबैभन्दा अचम्मलाग्दो कुरा यो थियो कि मैले पनि कहिल्यै सोचेको थिएन कि तिनीहरूले यस्तो उत्तेजना पनि प्रयोग गर्न सक्थे। केही पनि पूरक किन्नको लागी मेडिकल नुक्सानको साथ आयो।
हाम्रो बिक्री एक वर्ष भन्दा कम र तीनमा तीन पटक मात्र छ, सिफिफ्रिन्स रसायनज्ञमा सबैभन्दा खरिद गरिएको पूरक हो। म सबैजनालाई सिफारिस गर्न चाहन्छु जसले औषधि प्रयोग गर्नु भन्दा अधिक वजन छ। म यो मेरो बिक्री को बढावा गर्न को लागी नहीं गर्नेछु। यो कारणले गर्दा मैले अनुभव गरेको छु कि को लागी पूरक प्रयोग गरेर ट्याप गर्न सेट गरिएको छ। "पावल अहिले सिफिफाइनलमा छ। "
शेरोन: "म चाहन्छु कि मैले सिफिफेरिन प्रयोग गर्न सुरु गर्नु अघि मेरो फोटोहरू पोस्ट गर्न सक्दिन। मैले अन्तमा मेरो सपनाको आकार लिन पाएको छु र म यसको बारेमा धेरै खुसी छु। म कसैलाई सिन्फिफ्रेन्स सिफारिस गर्नेछु जुन संघर्ष बिना वजन कम गर्न चाहन्छु। "
पल लुओल डेंगपॉल भन्छन्, "मैले विशेष गरी ती महिलाहरुसँग एक कठिन समय पाएको छु जुन केहि वजन बहाउन चाहन्छु। पुरुषहरूको विपरीत, तिनीहरू स्टिरोइडहरू प्रयोग गर्न सधैं असहज हुन्छन् किनभने उनीहरूले तिनीहरूको प्रजनन प्रणालीलाई असर पार्न सक्दछन्। "
उनले थपिन्, "म लामो समयसम्म सिन्फिफाइन प्रयोग गरिरहेको छु, र तिनीहरूले मेरो लागि राम्रो काम गरेका छन्। एक दिन, अमेरिकाबाट एक मित्र मेरो जिम भ्रमण गर्थे र मलाई मेरो महिला क्लाइन्टहरूमा सिन्फिफ्रेन एचसीएल पूरक प्रयास गर्न सल्लाह दिए। यो यति धेरै मान्य आवश्यकता थिएन किनकी यो एक पूरक हो, स्टेरॉइड को विपरीत मैले पहिले नै उनलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गरे। पहिलो केही क्लाइन्टहरू पूरै पूरै प्रभावकारिताको बारेमा आराम गर्नको लागि पर्याप्त थिए। यो चमत्कारहरू गरे, र तिनीहरूले धेरै चाँडै धेरै वजन बसाए जस्तै मैले ती छिटो बनाउनको लागि सानो क्याफिनसँग उनीहरूको खुट्टा मिलाउँथे। यी दिनहरू, सबैजना यो जादुई पूरक पनि पुरुषहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्। "
एमिली: "म Synephephrine पूरकका लागि Phcoker को धेरै सराहना गर्छु तिनीहरूले दुई महिना पहिले मलाई पठाए। मेरो भूख कम भएको छ र मैले मेरो शरीरमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू अनुभव गरिसकेको छु जुन मैले वजनको सम्बन्ध राखेको छु। अहिलेसम्म राम्रो छ। "
भेनेसा फोर्ड Vanessa फोर्ड भन्छन्, "सिन्फिफेरान एचसीएल भन्दा राम्रो मूड बूस्टर छैन। पहिलोमा मैले सोधेँ कि यो एक कमजोर उत्तेजना थियो जसले मलाई मेरो कफी लिने भन्दा राम्रो महसुस गर्दथ्यो। तथापि, केहि छठे अर्थले मलाई यो प्रयास गर्न भन्नुभयो। मैले मेरो पहिलो खरिद गरेँ र खुसी सुरु गरेपछि चीजहरू फरक हुन थाले। म सबैलाई एकैचोटि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो कि मेरो जिम प्रशिक्षक सोचिरहेको थियो जहाँ थप प्रेरणा आयो। मैले मितिको पूरक प्रयोग गर्न जारी राखेको छु, र म यो भन्न सक्दिन कि सिन्फिफेरान एचसीएल भन्दा राम्रो मूड बूस्टर छैन। " वजन घटाने को लागि Orlistat: कसरि यो बोसो फास्ट ले सकते हो?
फ्रेडरिक: "जादुई Synephrine पूरक को लागी मैले पछिल्लो एक वर्ष को लागि पांच किलो भन्दा अधिक बहाया छ। म पर्याप्त साथीलाई धन्यवाद गर्न सक्दिन जसले मलाई प्रस्तुत गर्यो। तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो मोटो जलाउने खुराक हुन् जुन मलाई थाहा छ। "
Synephrine के छ(5985-28-4)?
Synephrine (5985-28-4) एक alkaloid हो जुन सामान्यतया पूरक सिफिफेरेर HCL बनाउनको लागी प्रयोग गरिन्छ।
सिफिफ्रिना प्रायः कडा नारंगी फलबाट उत्पन्न हुन्छ जुन अत्यधिक रासायनिक मा ध्यान केन्द्रित हुन्छ। यद्यपि, यो फल अल्केलोइडको मात्र ज्ञात स्रोत होइन। अन्य खट्टे फलहरू जस्तै लेमोनहरू पनि सिफिफेरियो पाउडर पाउन पाइएको भए तापनि यो मिनेटमा अवस्थित छ।
Synephrine एक राम्रो बोसो बर्नर हो र मद्दत गर्दछ तौल घट्नु. यसले रक्तचाप बढाउन सक्छ र यसले हृदय समस्याहरूको सामना गर्न सक्छ।
Synephrine एक्शन को कार्यविधि एचसीएल पाउडर
Synephrine एक्शनको तन्त्रणाले विभिन्न प्रभावहरूलाई बताउँछ कि पूरकले शरीरमा धेरै उत्पन्न गर्दछ। निम्न यी प्रभावहरूमध्ये केही हुन् जुन शरीर अन्ततः शरीर सौष्ठवको अगाडिमा फरक आकारको पुन: प्राप्त हुन्छ:
1। चयापचय को प्रभाव
यो रसायनको कार्यको मुख्य मोड हो। दबाइले थर्मोजेनसिसको दर बढाउनेछ। यो जिगरमा गरिन्छ, र उपज सामान्यतया शरीरको लागि कुनै पनि खेलाडीको अन्तिम इच्छा हो जुन ऊर्जामा वृद्धि हुन्छ।
सिफिफेरानको कार्य चूहमा राखिएको थियो र निम्न प्रभावहरू जुन मानवमा के हुन्छ त्यस्ता हुन्छन्:
त्यहाँ ग्लूकोज र ग्लियोकोजनको वृद्धि भोग्नु थियो। यी शरीरमा ऊर्जाको मुख्य स्रोतहरू हुन्। त्यसैले तिनीहरूका विच्छेदले ऊर्जा उत्पादनमा नयाँ परिवर्तन ल्याउँदछ।
चूहों कि चूहों को शरीर मा मौजूद थिए वसा मा परिवर्तित नहीं गरियो। कुनै पनि बिल्डरबिल्डरको लागि, भाँडाको बिरुवा अन्तिम कुरा हो जुन तिनीहरू चाहन्छन्। बरु, सबैले अतिरिक्त वस जलाउन र यसलाई मांसपेशिहरु मा बदल्न चाहन्छ।
यो परिवर्तन एक सुधार दर मा हुन्छ जब ऊर्जा को पूरक उपयोग गरिन्छ। यसले Synephrine कुनै पनि प्रदर्शन एथलीट को लागि एक बहुमूल्य पूरक बनाउँछ।
चूहों को लिभर मा एटीपी को मात्रा मा काफी वृद्धि भएको थियो। यस शरीरको अंगमा रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको दर सुधार गर्न यो रूपान्तरण फायदेमंद छ। जब क्रियाको सुधार सुधारिएको छ, वसाको ब्रेकडाउन पहिले भन्दा बढी चाँडो दरमा हुन्छ।
चूहमा शरीरको कक्षमा अधिक ग्लुकोज खपत भयो। यो एंजाइम एएमपीके को उत्तेजना को माध्यम ले हुन्छ जो शरीर को वसा को जलन को उपचार मा महत्वपूर्ण छ। AMPK मा वृद्धि पनि शरीरको कक्षहरूमा बढी चिनी राखिएको छ किनकि यो ऊर्जा रिहा गर्न बिस्तारै छ।
एंजाइमहरू ए-एमेलेसेज र ए-ग्लुकोआइडेसको कार्य रोकिएको थियो। यी एंजाइमहरू हुन् जुन शरीरमा जटिल स्टार्चको पाचनको लागि जिम्मेवार छन्। यस प्रक्रियाको महत्व यो हो कि पोष्ट-माउल ब्लड शर्कराका स्पेसहरूको घटना धेरै हदसम्म रोकिएको छ।
2। उत्तेजना प्रभावहरू
सिफिफेरिनको प्रयोगले अल्फा 1 र अल्फा दुई एड्रेन्टल रिसेप्टरहरूको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, तर यसले फिनेलिभिनन र एपिडेरिनको कार्यमा निकै कम डिग्री पाउँछ। यो मतलब हो कि एक व्यक्ति को संभावनाहरु को हृदय मा वृद्धि दर को अनुभव को रूप मा राम्रो तरिकाले उच्च रक्तचाप को अत्यधिक कम से कम अनुभव गरिरहेको छ।
Synephrine को उपयोग पनि न्यूरोमाडिन U2 रिसेप्टर को सक्रियता को लागी नेतृत्व गर्नेछन्। यी अणुहरू मानव मस्तिष्कको हाइपोथोममसमा अवस्थित छन् र निन्द्रा नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार छन्। सिफिफेरेरको प्रयोगले हाइपोथोमसस सामान्यतया लामो समयसम्म जागरणता उत्पन्न गर्न रिसेप्टरहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
3। विरोधी भ्रामक प्रभावहरू
Synephrine को प्रयोग एनएफ-केबी सक्रियता लाई रोकथाम हुनेछ। यो पदार्थ अस्थमा रोग जस्ता अस्थमा जस्ता कारणहरू हुन सक्छ। Synephrine को उपयोग को पनि ठूलो मात्रा मा eotaxin-1 हार्मोन को कार्य को प्रभावित गर्न को लागि पाया गएको छ। यसले संक्रामक इलाकामा ईओसोइनफिलको गति रोक्छ।
यद्यपि प्रयोगका माध्यमबाट राम्रो तरिकाले साबित भएन, एसिटिलोकोलिनस्टरस को कार्य लाई रोक्नको लागि सिफिफेरिनको प्रयोग फेला पर्यो। यो रासायनिक अल्जाइमर रोग को कारण जानिन्छ।
Synephrine को स्वास्थ्य लाभ
जबकि सबै ड्रगहरू उनीहरूको ज्ञात साइड इफेक्ट छन्, उनीहरूले अझै पनि फायदाहरू हुन्छन् जब उचित प्रयोग गरे। एपिडेरिनको विकल्पको रूपमा सिफिफेरिन प्रयोग गरिएको छ। यो प्रमुख संसार पछि लागू औषधि प्रयोग नियामक संस्थाहरूले लागू औषधिको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
ठूलो चिन्ताको कारण लिड एपिडेरिनको प्रयोग पछि लाग्ने सम्भावना थियो। साथै, एडेड्रिडिन एक अत्यन्त बलियो उत्तेजक हो, र यो उच्च रक्तचाप को उत्तेजित गर्न जान्छ। यसैले, सिफिफेरिन एपिडाइन को लागि प्रतिस्थापन जस्तै जस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
निम्न केही छन् सिफिफाइन लाभहरू त्यो एक उत्तेजक उपयुक्त उपयुक्त प्रयोग पछि प्राप्त गर्न सेट छ:
1। Synephrine वजन घटाने
यो सबैभन्दा स्पष्ट मुद्दा हो जुन धेरै एपहाड्रेन्ट प्रयोगकर्ताहरु लाई प्रतिबन्धित औषधी लिँदा ठेगाना लगाउन चाहन्थे। सिफिफेरियन अत्यधिक शरीर वसाको हानि सहयोगमा एपिडेरिनको रूपमा प्रभावकारी छ। यो परिणामको वजन कम हुनेछ।
शरीरको चयापचयको सुधारले पनि औषधीले पनि काम गर्दछ। जब यो हुन्छ, शरीर प्रक्रियाहरू छिटो दरमा हुन्छन्, र थप वसा जलाउँछ।
लिपोलिसिसको माध्यमबाट बोसो ब्रेकडाउनको प्रक्रिया प्राप्त गरिन्छ। यसमा बोसो ऊतकहरूमा पाइने रिसेप्टरहरूमा प्रभाव समावेश गर्दछ। यसले सुनिश्चित गर्नेछ कि वसा ब्रेकडाउन व्यक्तिले पूरक प्रयोग गर्नुभएन भने भन्दा छिटो दरमा हुन्छ।
यो प्रक्रिया जसको माध्यमबाट अतिरिक्त वसा हटाइन्छ र यसको माथिका मांसपेशिहरु उत्पन्न गरिन्छ थर्मोजेनेसिसको रूपमा चिनिन्छ। यो एक स्वाभाविक रूपमा प्रसोधन प्रक्रिया हो किनकि धेरै ढिलो दरमा।
2। भूटान हानि
अधिकांश मानिसहरू कम से कम केहि को लागि एक भूख हुनेछ कि पोषणशील आफ्नो स्वस्थ भलाइ को लागि उपयोगी छैन। यसमा जमिनहरू जस्तै आइस क्रीम, फ्रिज, र कुकीजहरू समावेश छन्। त्यस्ता खानाहरू मासु मा एक कालो हुन् विशेषतया कसैलाई जसले अत्यधिक वसा गुमाउँछ।
यो कारणले गर्दा क्यालोरेटिक सेन्कले दर निर्धारण गर्दछ बोसो हानि। जब धेरै धेरै क्यालोरीहरू लगाइएमा, तिनीहरूका बाक्लो भन्दा सट्टा मांसपेशीहरूलाई बदल्ने प्रक्रिया शरीरको लागि धेरै थोरै हुन्छ।
जब एक सिन्फिफ्रेन एचसीएल लेता छ, भूख को धेरै दबाइ छ। यो फ्याक्सको लागि धोका दिएको छ कि फायदेमंद छ चेक मा राखिएको छ। व्यक्ति अब शरीरमा स्वस्थ हुने खाना लिने फोकस गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसकारण, तपाईंको शरीरमा शरीरको बोसो नियन्त्रणको लागि पूरकको रूपमा सिफिफेरिनको प्रयोग मात्र उत्तम कुरा हो किनभने यो तपाईंलाई सबै माध्यमबाट प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्नेछ।
3। राम्रो मांसपेशी ग्लुकोज uptake
सिफिफेरिनको प्रयोगले शरीरद्वारा ग्लूकोजको माथि बढावा दिन्छ। यो दुई मुख्य तरिकामा हुन्छ। रक्त प्रवाहको बोसोमा राखिएको अत्यधिक ग्लूकोज एक सम्भावना घटना हो।
सिफिफेरिनको प्रयोगले रक्तमा अतिरिक्त ग्लुकोज सफा गर्छ र कंकाल मांसपेशिहरु लाई पठाइन्छ भनेर सुनिश्चित गर्नेछ। यहाँ ग्लूकोज सजिलै मांसपेशिहरु मा परिवर्तित गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, सिफिफेरिनले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि ग्लूकोज टर्मिनल मांसपेशिहरु लाई हस्तांतरण ऊर्जा को निर्माण को परिणामहरु को रूप मा चीनी को रूप मा तेजी देखि टूट जाएगा। यो ऊर्जा कुञ्जी चयापचय प्रक्रियाहरू ड्राइभिङ्गको लागि महत्त्वपूर्ण छ जुन व्यक्तिले अतिरिक्त वसा गुमाउन सक्छ।
4। एड्स ग्लूकोजेनेसिस
जिगर शरीरको अंग हो जुन शरीरमा भण्डारण गरिएको चियाको ब्रेकडाउनको साथ काम गरिन्छ। Synephrine को प्रयोग glycogenesis को प्रेरित गर्न को लागी जिगर को प्रभावित गर्दछ। यो महत्वपूर्ण प्रक्रिया अन्यथा निकै ढिलो दरमा घटाइनेछ। क्या Synephrine एचसीएल लाई lipolysis को प्रक्रिया को चाँडै छ।
5। नियन्त्रण मधुमेहमा मद्दत गर्दछ
जब शरीर बिस्तारै शरीरमा थप चिनी जलाउन र यसलाई उपयोगी ढाँचामा बदल्नमा ढिलो हुन्छ, मधुमेहको सम्भावना उच्च हुन्छ। Synephrine को प्रयोग अनुमति सीमा भित्र शरीर को ग्लूकोज स्तर को निर्धारण को सम्बन्ध मा एक समाधान हुन सक्छ। प्रयोग गर्दा, बिटर सुन्तला फलबाट व्युत्पन्न पूरक ऊर्जाको रिहा गर्न शकरहरूको ब्रेकलाई प्रोत्साहन गर्दछ।
व्यक्तिहरूले यसलाई प्रयोग गरेका व्यक्तिहरूले रक्तचापको शर्कराको स्तर परीक्षण गरेका छन्, र यो मधुमेह नियन्त्रण गर्न औषध क्षमताको प्रमाण हो।
6। सुधारिएको पाचन
व्यक्तिहरू जो पूरक छन् Synephrine एचसीएल प्रयोग गर्दै प्रयोग अवधि को समयमा हिन्दू को कम से कम मामलाहरु छ। साथै, यो मोर्चामा लागू औषधिको प्रभाव वैज्ञानिक रूपमा समर्थन गरिएको छैन।
तथापि, दावी उच्च डिग्री सबूत छ कि कभर नारंगी फल जसबाट सेन्फिफ्रिन्स मुख्य रूपमा व्युत्पन्न गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ पेटको अपसेट नियन्त्रण गर्न लामो समयसम्म प्रयोग गरिएको छ।
7। सर्जरी भन्दा पहिले तंत्रिका कम
यो प्रयोग वैज्ञानिक रूपले उचित संदेह भन्दा बाहिर सत्य साबित भएको छैन। तथापि, सर्जिकल अपरेसन भन्दा पहिले सिन्फिफेरिन प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम तपस्या पाउन पाइन्छ। दबाइले व्यक्तिलाई शान्त रवैया राख्ने बनाउन सक्छ जुन विशेष गरी एक प्रमुख अप्ठ्यारो देखि पहिले वांछनीय छ।
8। सुधारिएको मूड र ऊर्जा स्तर
मूड र व्यक्तियों को ऊर्जा स्तर मा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को कारण Synephrine को उपयोग पाया गएको छ। एक अध्ययन को अनुसार, यो औषधि को लाभ साबित भयो। चूहों को औषधि को उपयोग को प्रभाव स्थापित गर्न विभिन्न स्थितियों को अधीन थिए।
यो परिणामस्वरूप व्यवहार परिवर्तन भएको छ जसले उनीहरूका खानेकुराको बानी पनि प्रभावित गर्दछ। केहि समय पछि, स्वस्थ तनाव-मुक्त चूहों पानी मा राखियो र जो कि निराश थिए संग साथ तैरने को प्रेरित गरे। यस चरणको समयमा जोरदार चूहों धेरै सुस्त थिए।
त्यसपछि तिनीहरू Synephrine अन्तर्गत राखिएको थियो र उनीहरूको गतिविधि विशेष रूपमा सुधारिएको थियो। त्यसै गरी, जो पूरक प्रयोग गर्नुभएका व्यक्तिहरू अत्यधिक प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको तुलनामा उच्च आत्माहरूमाथि सम्भव हुन्छन्। Synephrine पूरक को ऊर्जा स्तरहरु लाई प्रयोगकर्ताहरु लाई सामान्य भन्दा बढि सुधारिएको पाइन्छ।
9। हानिकारक ब्याक्टेरियाको नियन्त्रण
केही व्यक्तिहरूले एन्टिबायोटिक जस्तै औषधि प्रयोग गर्छन्, र यो केही हदसम्म सहयोगी साबित भएको छ। उदाहरणको लागि, यसको प्रयोगले ब्याक्टेरियाको स्तरलाई कम गर्न मद्दत गर्यो जस्तै शरीरमा E. coli। यस मा लागू औषधि प्रभावकारी भए पनि पुरा तरिकाले प्रमाणित गरिएको छैन।
11। कम से कम सूजन
पूरै घडी शरीरको भागमा सूजनको सम्भाव्यता कम गर्नमा पूरै प्रभावकारी हुन्छ। औषधीहरूले भ्रामक कोशिकाहरू र साइटोकिनहरूको संख्यालाई कम गरेर कम गरेर कार्य गर्दछ। यो प्रभावित कोशिकाहरुमा एंटी-भ्रामक अणुओं को सक्रियता द्वारा गरिन्छ।
सूजन अणुहरु को उपस्थिति मा अस्थमा जस्तै धेरै एलर्जी रोगहरु लाई त्वरित गर्दछ। The Synephrine को उपयोग NF-kB को एकाग्रता कम गर्न एड्स लाई यसको सक्रिय अवस्थामा हानिकारक छ।
निस्सन्देह निस्सन्देही एपिएडाइनको लागि उत्तम प्रतिस्थापन हो जुन यसका लागि माथि उल्लेख गरिएको सबै क्षेत्रहरूलाई प्रतिबन्धित उत्तेजना जस्तै ठेगाना दिइनेछ। यो एक स्वच्छ तरिकामा पनि गर्दछ, यसको साइड इफेक्ट महत्त्वपूर्ण कम घातक हुन्छ किनकि एपिडेरिन को तुलनामा उच्च रक्तचापको कारण पनि कम खुराकमा प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ।
सर्वोत्तम परिणामहरूको लागि, यसलाई रसायनिक किन्ने सीधा औषधीहरू सीधा खरीद गर्न सल्लाहकारी छ। बरु, एक योग्य चिकित्सकलाई भेट्नैपर्छ जसले सुरक्षित रूपमा औषधि प्रयोग गर्ने र कुन चाहेको कुरा प्राप्त गर्नमा सही सल्लाह दिन्छ।
Synephrine को संभावित साइड इफेक्ट्स
सिफिफेरिनको प्रयोग पनि कुनै पनि अन्य औषधि जस्तै साइड इफेक्टहरूसँग पनि हुन्छ। तथापि, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना प्रयोग गरिएको खुट्टामा अत्यधिक निर्भर हुन्छ।
प्रभावहरू अत्यधिक हिसाबले सम्भव हुनसक्दछ जब एकले सिफिफेरिनको प्रयोगले क्याफिनसँग जोड दिन्छ। निम्न केहि Synephrine HCL साइड इफेक्ट हुन् जो पूरक प्रयोगकर्ताहरु द्वारा अनुभव गरिएको छ:
उच्च रक्तचापको कारणले गर्दा कुनै उत्तेजक 100% सुरक्षित हुन मानिन्छ। यद्यपि सिफिफ्रिना यस एपमा एपहाडिन भन्दा सुरक्षित विकल्प मानिन्छ, यसले उच्च रक्तचापको सम्भावना पनि सम्भव गर्दछ।
तथापि जोखिम कम छ। यदि उच्च रक्तचापको अवस्थाहरू छन् भने पूरक लिनबाट बच्न यो सल्लाह छ।
जस्तै यो उच्च रक्तचाप संग मामला हो, सिन्फिफाइन हृदय रोग को कारण मा ephedrine को रूप मा घातक को रूप मा विचार नहीं गर्न सक्छन्। यद्यपि, उनीहरूको विकासको विकास वा वृद्धि बढ्ने मौका हो, खासकर यदि यो क्याफिनसँग प्रयोग गरिन्छ।
यद्यपि, एक हृदय रोग को कारण या ट्रिगर गर्न उत्तेजना को संभावना को बारे मा एक बहस अझै पनि छ, केहि अध्ययनहरु संग कि यदि केवल कैफीन संग एक साथ प्रयोग गरेमा कुनै हृदय हृदय प्रभाव छैन।
शरीरको चयापचय प्रक्रियाको दर बढाएर उत्तेजना काम गर्दछ। सामान्यतया, यो हृदय धराप दर मा वृद्धि संग छ किनकि हृदय शरीर को अंग को रूप मा संभव को रूप मा ज्यादा रक्त प्राप्त गर्न को प्रयास गर्दछ। Synephrine एचसीएल पाउडर को उपयोग को दिल को बिरुद्ध मा वृद्धि को कारण हुन सक्छ यदि यो शायद नै नै अनुभव हो।
तथापि, क्याफिन जस्ता अन्य औषधिको साथ उत्तेजक प्रयोग गरी समस्या बढाउन सम्भव छ। यस्तो अवस्थामा, हृदयघात पनि अनियमित हुन सक्छ, र यो घातक हुन सक्छ जब यो चाँडै सुचारु नभए पछि मृत्यु को लागी सक्छ।
घातक यदि सर्जरी भन्दा पहिले नै उच्च खुराक मा प्रयोग गरिन्छ
यो ड्रगले केही व्यक्तिले शल्यक्रिया गर्नुअघि तनाव कम गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ। यो प्रभाव सामान्यतया प्राप्त हुन्छ, तर यो अत्यन्त कम सावधानीमा सुरक्षित छ। जब खुराक उच्च छ, सर्जरी भन्दा पहिले सिफिफेरेर एचसीएलको प्रयोग उच्च रक्तचाप वा कार्डियक कैदको कारण हुन सक्छ।
यो समस्या मृत्यु हुन सक्छ यदि मुद्दाहरू सञ्चालनको समयमा विकसित हुन्छ। यसकारण, सिफरफिरी वा अपरेसन भन्दा पहिले कुनै अन्य उत्तेजक देखि बचाउन यो सल्लाह छ।
केहि अवस्थामा, एक चिकित्सकले प्रक्रिया सुरु हुन अघि औषधि प्रयोग गर्न को लागी निर्धारित गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, यो सञ्चालनको क्रममा एक समस्याको समाधान गर्न दबाइको निर्देशकसँग कडा अनुशंसा गर्नु पर्छ।
सिफिफाइनन उच्च खुराकको प्रयोग पनि भित्री कारणहरूको कारण हुनसक्छ, विचार गर्दै यो एक उत्तेजक हो।
अन्य साइड इफेक्ट
सिभफेरिन पूरक प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले अन्य साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्छन्। तथापि, प्रभावहरूको गम्भीरता एक व्यक्तिबाट अर्कोमा भिन्न हुन्छ र प्रयोग गरिएको खुट्टासँग धेरै चीजहरूमा निर्भर हुन्छ कुञ्जी। यी केही प्रभावहरू समावेश छन्:
गुर्देको असफलता पनि रिपोर्ट गरिएको छ। तथापि, यो विशेष गरी व्यक्तिहरु जसले गुर्दे समस्याहरू पर्थ्यो।
छाती दुखाइ यो लक्षण शारीरिक व्यायाम संग कसरत सत्र को समयमा मांसपेशियों को तनाव बाट भ्रमित हुन सक्छ।
यो केवल ओवरडोज वा एक संयोजन पछि अर्को शक्तिशाली शक्तिशाली उत्तेजना संग हुनेछ।
माथि उल्लेखित साइड इफेक्टहरू पूरै पूरै लिने एकमा सीमित हुनुपर्दछ। अनुसन्धानले देखाउँछ कि कुनै लक्षणहरू अत्यधिक स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ र केवल ठूलो हुन्छ जब ठूलो सिन्फिग्रिन खुट्टा प्रयोग गरिन्छ।
स्तनपानको मासु र आशावादी व्यक्तिमा लागू औषधिको असरमा सीमित जानकारी छ। यसकारण यसकारण औषधि प्रयोग गर्नदेखि टाढा रहनु आवश्यक छ किनकि कसैले थाहा नपाएपछि के पछि विकास हुनेछ।
Synephrine सिफारिस गरिएको प्रयोग
सिफिफेरिएन्ट निर्माताको प्राथमिकतामा आधारित फरक मात्रामा बिजुली निर्माणका थुप्रै पूरकहरूमा समावेश छ। सबै भन्दा सामान्य प्रयोग गरिएको खुराक प्रति दिन 100mg बारे हो। यो वजन घटाने प्राप्त गर्न को लागी पर्याप्त खुराक मानिन्छ।
यद्यपि धेरै मानिसहरूले सामान्यतया माथि उल्लेखित लागू गर्दछ सिन्फिफाइन खुट्टा, यो प्राय: प्रयोगकर्तामा प्रभावको कारण विचारको माथिल्लो सीमामा छ। 30mg को लागी कम को एक खुट्टा विशेष गरी beginners को लागि पर्याप्त छ।
अन्य प्रकारका उत्तेजनाहरू सँगसँगै पूरक प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, खुल्ला सम्मिश्र उद्देश्यका लागि कमको रूपमा राखिएको हुनुपर्छ। यो हो किनभने सिफिफेरिनको प्रयोग एक साथ उत्तेजक जस्तै कैफीनले प्रयोगकर्तालाई उच्च रक्तचाप र हृदयघात दर वृद्धि गर्न सक्छ। यद्यपि, पहिले उल्लेख गरिएको, यो एक विषय हो जुन अझै छलफलमा छ।
सिफारिस गरिएका रकमहरू जुन शर्तयुक्त प्रयोगकर्ताहरू भन्दा पनि भन्दा बढी हुँदैन 200mg प्रति दिन। यो चिन्ह माथि केहि पनि विषैले मानिन्छ र व्यक्तिले उत्तेजक प्रयोगका साथ घातक साइड इफेक्टको बट अनुभवको जोखिममा राख्नेछ। यो सल्लाह दिइन्छ, 10 सँग 20mg सुरू गर्न सिफिफिना तपाईंको शरीरसँग असामान्य रूपमा उपयुक्त छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
यो प्रारम्भिक खुट्टा लिन पछि, तपाईंले पूरकमा शरीरको प्रतिक्रियाको आकलन गर्न समय लिनु पर्छ। यदि सबै राम्रो छ भने, 20mg को दोस्रो खुट्टा दुई घन्टा पछि थप गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा सुरक्षित खुराक अन्तराल प्रत्येक दुई घण्टामा औषधि लिइरहेको छ। तथापि, निद्रा देखि चार घन्टा पहिले लगभग औषधी लिन को लागी बिरुवा सल्लाहकार छ। शरीरमा प्रभावकारी हुन पूरै पूरै लगभग दुई घण्टा लाग्छ।
त्यसकारण, सिन्फिफाइन लिनु भएको बेला तपाइँ आफ्नो निद्रामा बन्द गर्नाले तपाइँको शरीरसँग बाधा पुग्ने छ। तपाईं निद्रा लाग्न सक्नुहुनेछ।
वजन घटानेको लागि दायाँ सिपाफेरिन खुसी
छलफलको लागि शीर्ष शीर्षक: सिफिफाइन बनाम कैफीन
एक Synephrine / क्याफिन संयोजन सुरक्षित छ?
जब उपभोग गरिन्छ, सिफिफेरिनले शरीरको चयापचय बढाउँछ, जबकि क्याफिन एउटा बढी जागिर हुन्छ। केहि पूरकहरुमा कैफीन र सिन्फिफाइनल को लागी उनको अवयव को रूप मा दुई को लाभ को पेशकश को रूप मा छ।
यद्यपि, त्यहाँ एक निरन्तर छलफल भएको छ Synephrine बनाम कैफीन; Synephrine र क्याफिन को उपयोग। केही अध्ययनहरूले बताउँछ कि दुईको संयोजनले एडेडेरिनसँग मिल्ने औषधि बनाउँछ र यो ड्रगसँग सम्बन्धित साइड इफेक्टहरू मिश्रणको परिणामको रूपमा पनि अनुभवी हुन्छन्।
फिनल्याण्ड र जर्मनीले भर्खरै जारी गरेको स्वास्थ्य मूल्याङ्कनले संकेत गर्दछ कि सिफिफेरिन र क्याफिनको संयोजन सम्भावित रक्तचाप र हृदय दरको सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरू बढ्न सक्छ। त्यस टिप्पणीमा, केही युरोपियन सरकारी एजेन्सीले स्वास्थ्य सुरक्षा चिन्ताको परिणामस्वरूप बजारबाट दुई खुराकहरूको संयोजनको साथ पूरक औषधिहरू हटाउन आदेश दिएको छ।
अर्कोतर्फ, केही अध्ययनहरू, उदाहरणका लागि BfR ओपिनियन संख्या 004 / 2013 शीर्षक भएको "खेलकुद र वजन घटाने उत्पादन को स्वास्थ्य मूल्यांकन सिन्फिफेरेंस र कैफीन", पत्ता लगाईएको छ कि सिन्फिफेरिनमा कुनै पनि हृदय प्रभाव छैन यदि एक्लै प्रयोग वा कैफीनको साथमा।
के Synephrine र क्याफिन एक नै फाइदा प्रदान गर्दछ?
साथै, त्यहाँ व्यक्तिहरूको एक वर्ग हो जसले विश्वास गर्दछ कि सिफिफाइनल र क्याफिनले पनि फाइदा प्रदान गर्दछ। यद्यपि, यो उल्लेखनीय छ कि यद्यपि दुवै उत्तेजनाहरू छन्, तिनीहरूको कार्यक्षमता फरक छन् र तिनीहरूका प्रभावहरू हुन्।
क्याफिनले केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र, पाचन प्रणाली र सर्कुलर प्रणालीलाई असर गर्छ। क्याफिन प्रयोगको नतिजाहरू अलर्ट, जागरण र मूड को बढावा समावेश गर्दछ। यसको साइड इफेक्टले जेटरहरू, टाउको दुखाइ, चिन्ता र चिन्ता पनि समावेश गर्दछ।
अर्कोतर्फ, सिन्फिफ्रिनाले प्रायः तपाईंको शरीरको चयापचयलाई असर गर्छ, जसले गर्दा वृद्धि चयापचय, ऊर्जा व्यय र शक्ति।
यसैले, Synephrine र क्याफिन भिन्न प्रभावहरु संग दुई अलग उत्तेजक हुन्छन्।
खरीद Synephrine पूरक अनलाइन
के तपाईं सिन्फिफ्रिना पूरकको आवश्यकता छ? सुसमाचार तपाईं हो अनलाइन Synephrine अनलाइन, र अर्कोतर्फ, दुर्भाग्यवश, वहाँ कम मानकहरू अनलाइन बेचेको छन् र तपाईं तिनीहरूलाई सजिलै वास्तविकबाट अलग गर्न सक्नुहुन्न।
यस्तो रूपमा, यो सर्वोच्च छ कि तपाईं एक विश्वसनीय, सम्मानित अनलाइन विक्रेता बाट Synephrine पूरक खरीद, अधिमानतः Phcoker.com।
यहाँ सरल चरणहरू छन् जुन तपाईले Phcoker.com बाट सिफिफेरिन खरीद गर्न पछ्याउनु हुनेछ:
खरिद अनुप्रयोग फारम भर्नुहोस् भर्ती गर्नुहोस् र पेश गर्नुहोस्
यदि तपाइँलाई छोटो छोटो चिकित्सा प्रश्नावली भर्नु आवश्यक छ भने, त्यसो गर्नुहोस् र पेश गर्नुहोस्। फोकोकरको विशेषज्ञले भरिएको फारम प्रयोग गर्नेछ जुन तपाईंको अर्डर अनुमोदन गर्ने छ कि छैन।
स्वीकृत भएपछि एक अर्डरको लागि भुक्तान गर्नुहोस्।
खुल्ला पूरकहरूका लागि पर्खनु पर्दछ (तपाइँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने तीन भन्दा बढी दिनका लागि)
तपाइँ सिन्फिफेरिन अनलाइन किन्न कत्तिको सजिलो हुनुहुन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ?
तथापि, तपाइँ पूरक किन्नु भन्दा पहिले, यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाईं स्वास्थ्य हेरविचार विशेषज्ञलाई सही खुराकमा सल्लाहको लागि प्रयोग गर्नुहोस् र यदि दृष्टान्त तपाईंको लागि सुरक्षित हुनेछ भने दृष्टान्तको लागि। विशेषज्ञले तपाईंलाई उपयुक्त खुराकमा सल्लाह दिनेछ र यदि पूरक लिने साइड इफेक्टको विकास गर्ने सम्भावनालाई सल्लाह दिनेछ।
निष्कर्ष Synephrine मा (5985-28-4)
संक्षेपमा, सिफिफेरिनले वजनको कटौतीमा प्रयोगको लागि एकदम पूरकको सबै बाकसहरू टिक्स गर्दछ। यो धेरै नम्र साइड इफेक्ट छ, र यसले कसरत सत्रमा आफ्नो ऊर्जा स्तर सुधार गर्न कुनै पनि एथलीटको लागि आदर्श संयोजन गर्दछ। यसले निर्बाध रूपमा एक पटक उच्च प्रतिष्ठित एपहाड्रेन्सलाई प्रतिस्थापन गरेको छ र उच्च रक्तचाप विकासको जोखिम बिना एक उच्च प्राप्त गर्न एक राम्रो विकल्प प्रदान गर्दछ।